musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mazororo emahombekombe ndiyo inofarirwa sarudzo yeBrits
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Hazvishamisi kuti ingangoita hafu yevagadziri vezororo vanoda kuenda kunzvimbo ine zuva remahombekombe egungwa - kunyanya sezvo zhizha reBritish rave richiodza mwoyo kune vanogara.
Fly-and-flop beach break isarudzo yaunofarira maBrits vanoda zororo remhiri kwemakungwa gore rinouya, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Vanosvika hafu (43%) vari kuronga kutizira kumhepo dzekunze vakati zororo remahombekombe ndiro richava sarudzo yavo yepamusoro.
Sarudzo yechipiri inonyanya kufarirwa yaive yekuzorora kweguta, yakataurwa nechetatu (31%) yevakapindura. Dzimwe sarudzo dzakakurumbira dzaive zororo rekushanya (16%), rwendo (15%), hutano (8%) uye ski (7%).
Zvichida zvichiratidza chokwadi chekuti nzvimbo dzekufamba dzakashomeka muna 2020 na2021, vangangoita kota (23%) vakati vaida kuenda kure-kure, nepo 17% vakagutsikana nekuzorora-pfupi.
Uye nzira yekubhuroka zvakare inoita kunge inoratidza matambudziko akapararira ekudzoserwa mari kwezororo uye kubviswa pakati pedenda, nechikamu chetatu chevatengi (31%) vachiti vaizobhuka pasuru, uye vanongo 8% vachisarudza pekugara muhupfumi hwekugovana - vakadaro. seAirBnB - nepo imwe 8% ichiti vaizofara nezororo reDIY.
Zvakawanikwa zvakabva kuWTM Indasitiri Report, iyo yakabvunzurudza vatengi zviuru nezvezvirongwa zvavo zvekufamba - uye mazana matanhatu nemakumi mana nevasere vavo vakati vanoda kuve nezororo remhiri kwemakungwa zhizha rinouya.
Pavakabvunzwa nevavhoti nezve kwavanoda kuenda, hotspot yepamusoro yaive Spain, ichiteverwa nedzimwe tsika dzechivanhu dzemuEurope dzakaita seFrance, Italy neGreece, neUSA - izvo zvanga zvisingabvumirwe nevanoita zororo reBritish kubva pakatanga denda. kubata muna Kurume 2020.
Tsvagiridzo iyi ichave nhau inogamuchirwa yekutengeserana kwekutandara kwevaraidzo, uko kwanetsa nemakore angangoita maviri emhirizhonga, zvirambidzo uye kuvhiringidza mameseji kubva kumakurukota.
Tsvagiridzo yakaitwa naAbta yakaratidza kuti zhizha 2021 kubhukidzwa kwaive ne83% pasi muna 2019 uye ingangoita hafu yemakambani ekufambisa akashuma kuti hapana kuwedzera kwekuchengetwa kwe2021 zvichienzaniswa negore rapfuura, zvisinei nechirongwa chekudzivirira icho chakaona vanopfuura makumi masere muzana evakuru vanokodzera veUK vatove vakajaidzwa.
Mabhodhi evashanyi vanobva kunzvimbo dzakaita seSpain, France, Italy, Greece neUSA vanga vachitowedzera zviitiko zvavo zvekusimudzira munguva yezhizha kuti vaone kuti nyika dzavo dziri pamberi pekutengesa nevatengi.
Uye ndege nevashandisi vanga vachivaka huwandu sekudiwa kunodzoka, kunyanya kana zvirambidzo zvakaita seye traffic light system uye PCR bvunzo dzarerutswa.
Simon Press, WTM London, Exhibition Director, akati: "Takatsungirira makore angangosvika maviri ezvirambidzo zvekufamba uye zvinovhiringidza, zvinodhura mirau saka hazvishamise kuti ingangoita hafu yevaenzi vezororo vanoda kuenda kunzvimbo inotonhorera yemahombekombe - kunyanya sezvo zhizha reBritish rakaita. zvakare zvave zvichiodza moyo kune vanogara.
"Vazhinji vedu takavharirwa pamba panguva yekuvhara uye vazhinji vedu vachiri kushanda kubva kumba, saka tarisiro yekuzorora pane imwe nzvimbo yezuva muMed iri kuyedza."